तपाईंको WordPress साइट मा कसरी उछाल दर घटाउनुहोस् - ITS Techschool
बन्द मौका छ कि हामीले एक डलर पाउनु भएको बेला कसैले कसैलाई भने वा उछाल दरको बारेमा प्रश्न सोध्दछ, हामी टाइक्रो हुनेछौं। यो भनिएको छ, एक ठूलो सम्झौता गरिएको छ, बनाइएको र यस "जनावर" गतिविधि मेट्रिक बारे एक जानकारी प्राप्त भएको छ जुन एक र सबैलाई दह्रो लाग्ने देखिन्छ।
बिन्दु दरले तपाईलाई कत्तिको चासो दिनुमा बिन्दुमा
किन तपाईको WordPress साइट मा उछाल दरें घटाउनुहोस्
तपाईंको वर्डप्रेस साइटमा बोनस मूल्य घटाउनुहोस्
बाउन्स दर प्रयोगकर्ता संतुष्टि मीट्रिक हो
अझ राम्रो रूपान्तरण दर
WordPress SEO को लागि एक उच्च उछाल दर खराब छ
तपाईंको वर्डप्रेस साइटमा घट्दो उछाल मूल्य
तपाईंको ट्राफिक जोड्नुहोस्
तपाईंको वर्डप्रेस साइटको गति बढाउनुहोस्
WordPress साइट नेविगेसन बढाउनुहोस्
तपाईंको सामग्री उछाल दर घटाउनको लागि बढाउनुहोस्
तपाईको एसईओ र पीपीसी विज्ञापन बढाउनुहोस्
उछाल दर र लिंक गर्दै
सम्बन्धित पोस्टहरू समावेश गर्नुहोस्
ब्लग टिप्पणी गर्दै
कुनै पनि मामला मा, शायद यो तथ्य को प्रकाश मा छ कि जब उछाल को दर को दरले धेरै peeps जो सामान्य रूप देखि निर्दिष्ट गरिन्छ कुख्यात उछाल को बारे मा एक कुरा को बारे मा foggiest विचार छैन, या जो पनि अन्य गतिविधि मीट्रिक जो कि चिंतित छ । भित्री वेबमा बस्छन नम्रताको। यो डरलाग्दो छ जस्तै यो डरलाग्दो छ।
यहाँ सत्यको स्न्यापशट हो: बounce दर अनिवार्य रूपमा व्यक्तिको दर हो जसले तपाईंको साइट बिना समीक्षा बिना पासगवे पेज भन्दा अन्य पृष्ठमा छोड्छ। धेरै बुझ्ने? हामीले यस प्राणीलाई अन्तिम पटकको लागि उछाल दर भनिने गोप्य को आवरणलाई लिनु पर्छ।
हामी कसरी केहि सन्तुष्ट संभावना स्वीकार गर्छौं Google मा "वर्डस्पेस विशेषज्ञ" खोज्छ, र तपाईंको साइट प्रारम्भिक दस (10) को बीचमा आउछ, मूलतः यस तथ्य को प्रकाश मा आउछ कि तपाईले यो वर्डप्रेस एसईओ उत्तम प्रविधि पछि लिखित लिनुभयो। तपाईंको अनुमानित "उत्तम WordPress सल्लाहकार कसरी छनौट गर्नुहोस्" बाट उपस्थित हुन मेटा चित्रणमा असाधारण धन्यवाद देखिन्छ जुन तपाईंले Google लाई बलियो बनाउनुभएको छ, उनी तपाईंको साइटमा नेविगेट गर्छन्। यो विशेष ब्लग प्रविष्टि तपाईंको पासेज पृष्ठमा वा केवल "खण्ड" मा परिणत गर्दछ।
कुनै पनि अवस्थामा, जब उनि तपाईंको साइटमा पुग्छन्, तिनीहरूले चाँडै पत्ता लगाउँछन् कि उनीहरूले के आशा गर्थे, त्यसैले तिनीहरू पछाडीको कुटाइमा हिर्काउने, अर्को URL क्रमबद्ध गर्नुहोस् वा सञ्झ्यालमा सञ्झ्यालमा टाँस्नुहोस्। तपाईको साइटको बाहिरी छोडिने कुरासँग जोडिएको पासबावे पृष्ठ छोड्नको सरल क्रियाकलाप उछालको रूपमा चिनिन्छ।
जब तपाईं केहि बोनस पछि यी बोनसहरू ट्रयाक गर्नुहुन्छ, र पछि उनीहरूको साइटमा गएका व्यक्तिहरूको समग्र संख्या संग यसको विपरीत, तपाइँ एक अनुपात पाउनुहुन्छ। दरको अनुपातको एक व्याख्या गर्नुहोस् र तपाईंको उडान दर छ।
यो बिट म्याथ सोच्न अनुमति दिनुहोस्। यहाँ प्रभावी ढंगले विचार व्यक्त गर्न एक सजीलो रेखा हो, तपाईंको WordPress सल्लाहकार पोस्ट ले 1,000 अतिथिहरू प्राप्त गर्यो, र पोस्ट समीक्षाको अन्त्यमा तुरुन्तै 750 बाँकी छ, तपाईंको बोनस दर हुनेछ:
750 / 1000 = 0.75 = 75%; बोनस दर = बोनस / कुल आगन्तुक x 100%
तपाईंको बिन्दु दरले तपाईलाई कत्तिको चासो दिनुमा बिन्दुमा
चूंकि हामीसँग "पीडा" पथ देखि "के" छ, तपाईले कहिलेकाँही तपाईंको उछाल दर बढाउनुपर्छ? मेरो ठेठ राउन्ड बनाउँदा, मैले नील पटेलको उत्कृष्ट उत्कृष्टता पार्यो जुन बेंचमार्क मिडपट्टिहरूमा उछाल दरको लागी समावेश थियो। Rundown समाप्त गर्दै 98 - 70% र 90 - 40% मा सामग्री स्थानीयहरूमा ग्रीष्मकालीन पृष्ठहरू मार्फत पछाडि 60% को रूपमा उछाल दरहरू संग वेब पत्रिकाहरू हुन्। 30 आधा मा लीड युग साइट्स मा पुग्यो, खुदरा 20 - 40% मा स्थानीय स्थानहरु द्वारा निस्किएको छ र 10 - 30% मा प्रशासन गन्तव्यहरु द्वारा पछाडि।
द्वारा र ठूलो, तपाईलाई बलियो हुनु पर्छ यदि तपाईंको WordPress उछाल दर 60% भन्दा माथि छ। आधा अनुहार राम्रो छ, तथापि तपाईं घटनामा 10% को तल स्कोर गर्न सक्नुहुनेछ, तपाई शानदार हुनुहुन्छ। तथापि अन्तर्वार्ताहरूलाई पछाडि पार्न प्रयास गर्नुहोस्, तपाइँले तपाइँको रेकर्ड गरिएको प्रदर्शनीहरू विरुद्ध तपाईंको बोनस दरको मात्रा (वा सोच्नु पर्छ) को मात्रामा हुनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, बन्द मौकामा तपाईले पहिले नै 95% को उल्टाउनुभएको रकम नामाकरण गर्नुभएको छ, त्यसो त पछि यो 65% लाई पुनःप्राप्ति उपायों लाई यथार्थ बनाउन को लागी ल्याईयो, उदाहरणका लागि, हामी आज यहाँ साजिलो हुनेछौं, तपाईले बुलबुले पप गर्नुपर्छ यसको लागि यो एक अविश्वसनीय परिवर्तन हो, यस तथ्यको बावजूद यो 60% भन्दा माथि छ।
यस बीच, तपाईलाई याद गर्नु पर्छ कि त्यहाँ पासवर्ड स्थानीयहरू निश्चित छन्, र यहाँसम्म पनि पदार्थ, निश्चित कुराको रूपमा उच्च उछाल दर हुनेछ। एक सभ्य दृष्टान्त एक-पृष्ठ वर्डप्रेस साइट हो। एक पदार्थ को मामला उच्च उछाल दर को एक धन्यवाद पृष्ठ हो जो केहि अन्य पेज को संकेत गर्दैन। साइटहरू, उदाहरणका लागि, अनलाइन शब्द सन्दर्भहरूसँग उच्च उछाल दरहरू हुन सक्छन्, किनभने ग्राहकहरूले नियमको रूपमा पृष्ठमा टाँस्न सक्दैन जुन उनीहरूको खोजी खोजीमा समावेश छन्।
यी अवधारणाहरु मध्ये हरेक को सम्झना तपाईंको बounce दर को निर्णय को समयमा। कुनै पनि अवस्थामा, सबै कारण र उद्देश्यका लागि, 60% हाम्रो किनारा उछाल दर हो। त्यसोभए, तपाईं जोखिम क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। 40 - 60% तपाईं जीवित हुनुहुन्छ, 10 - 40% तपाईं राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, र <10%, तपाईं एक सजावटको योग्यता।
हामीले प्रभावकारी ढंगले के र कहिले सुरक्षित गरेका छौं। कुनै पनि अवस्थामा, किन कि यो उच्च उछाल दरमा एक शट लिन प्रयास गर्न को लागि यो एक राम्रो विचार हुनेछ? किन असुरक्षित कम उछाल दर राख्न आवश्यक छ? म चाँडै हुनेछु, त्यसैले हामी अहिले सम्म को व्यवस्था गर्न सक्दछौं।
मलाई उच्च उछाल दर संग एक साइट को प्रदर्शन, र म तिमीलाई निराश ग्राहकहरु संग एक साइट को प्रदर्शित गर्नेछ। एक-पेज स्थानीयहरूको लागि बाहेक, अनलाइन शब्द सन्दर्भहरू, मिलियन डलर गृहपृष्ठ र अल, उच्च उछाल दरको साथ कुनै पनि साइट खराब ग्राहकको संलग्नतासँग पर्याय छ।
बन्द मौकामा कि उछाल दर कम छ, तपाईं केहि काम पूरा गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईं के गरिरहनुभएको को एक अधिक मात्रा को पूरा गर्नुपर्छ। घटनामा यो धेरै उच्च छ, तपाईं आधारमा एक साथ तपाईंको घर प्राप्त गर्नु पर्छ कि राम्रो क्लाइन्ट सगाईको साथ अविश्वसनीय इकाईको रूपमा चल्छ ...
दिइएका तपाईंले आफ्नो वर्डप्रेस साइटमा सम्भावित लाभ उठाउनुभएको छ, तपाइँलाई अनुकूलित अतिथिहरूमा अनुकूलन प्रतिमाहरू, ग्राहकहरू, वा विश्वासी र रिश ग्राहकहरू बदल्न आवश्यक छ। तपाईं एक कठिनाई यो समय हुनेछ यदि यो व्यक्ति आफ्नो आसपास को साइट को बाहिरी बनी को देखने को लागि चारैतिर रहन छैन। कार्यक्रममा सबै व्यक्तिहरूले तपाइँको प्रस्तुतीकरण पृष्ठहरूमा गर्छ उछाल बन्द छ, तपाईंले आधिकारिक रूपमा युद्ध गुमाउनु भएको छ।
तपाइँलाई सम्भावना चाहिन्छ कि उनीहरूलाई जडान गर्न र तपाइँले बिल तिर्न को लागी अप्ठ्यारोमा लाग्ने सुझावहरू स्न्याप गर्न सुझाव दिनुहोस्। एक कम उछाल दर निश्चित छ कि साइन इन व्यक्तिहरूले तपाईंको साइट छोड्न छोडेनन् तिनीहरू तिनीहरू आइपुग्छन्। विपरीत निरन्तर रहन्छ।
नोट: तपाईं उच्च उछाल दर र अविश्वसनीय परिवर्तन दर हुन सक्छ।
एक सभ्य मामला एक-पृष्ठ वर्डप्रेस साइट हो जुन सम्भावनाले तपाईंलाई कल गर्दछ। घटनामा 1000 व्यक्तिहरूले पृष्ठमा पाउँछन् र 800 ले तपाइँलाई बुझेको छ भने तपाईले बोनस दर 80% सम्भावना बिना 100% परिवर्तन दर स्कोर गर्नुहुन्छ।
अर्को मामला: चलो भन्छौं कि तपाई अझै आफ्नो वस्तु पठाउनु भएको छ र तपाइँको प्रस्तुतीकरण पृष्ठको अन्त्यमा, तपाइँ समूहमा बढ्नको लागी आफ्नो वेबमा आधारित सामाजिक सञ्जाल रेकर्डमा जडानहरू समावेश गर्दछ। तपाईं आफ्नो समूह को विकास गर्न को लागी पवन हुन सक्छ कि तपाईंको साइट उच्च उछाल दर सूचीबद्ध छ भन्ने संभावना को बावजूद।
यो जस्तै हो कि, यदि तपाइँको CTA ले तपाईंको साइटमा अर्को पृष्ठमा सम्भावना समावेश गर्दछ (जस्तै अनुरोध वा अनुबंध आकार), तपाईं उच्च उछाल दरको साथ उच्च परिवर्तन दर हुन सक्दैन। दुबै दुई साथ पुग्न सक्दैन - आगो र पानीको शैली।
जुनसुकै लम्बाईको लागि ग्राहकले तपाईंको पृष्ठसँग कुनै पनि अपरिभाषित तरिकामा सहयोग गर्दछ, तपाईंको परिवर्तन छ। बन्द मौका छ कि तिनीहरू तपाईंको जोडिएका पृष्ठहरूको बायाँका साथ सहयोग बिना छोड्छन्, तपाईसँग उच्च उछाल दर हुनेछ। अगाडि बढ्दै ...
BAM! यहाँ केहि चीज छ जो दृढतापूर्वक खडा गर्नु पर्छ। के? व्यक्तिहरूले जो गर्दै छन् सबै छोड्न र तपाई एसईओ निर्दिष्ट गर्दा फोकस गर्नेछन्। त्यो वेब क्र्रालरबाट "नि: शुल्क" आचरण बिना, राम्रो, अकाउन्टमा छ, कुन परिवर्तन र ग्राहकको संलग्नता छ?
अनुमोदन, तपाईं सजिलै संग विभिन्न स्रोतबाट आन्दोलन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तथापि तपाईं घटना एसईओ शोषण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा, तपाईं व्यापारको ठूलो सम्झौतामा हाम्रो हानि महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं वास्तव मा तालिका मा नकदी छोड रहे हो।
त्यो किन छ? सबसे पहिले, सबै भन्दा अनलाइन संस्थाहरू वेब अनुक्रमणिकाबाट क्रियाकलापको एकदम ठूलो लम्प प्राप्त गर्छन्। स्पष्ट रूपमा, तपाइँ मनपराउनुहुने छैन। यसबाहेक, सामान्य जनसंख्या जसले वेब खोज उपकरणहरूको माध्यमबाट प्रबन्धहरूको खोजी गर्ने सबैभन्दा मनमोहक खरिदहरू हुन्। त्यसैले कुनै संदेह छैन, एसईओ आवश्यक छ। यसबाहेक, उच्च उछाल दरहरू स्कोर गर्ने तरिका होइन जुन तपाईले एक मजबूत एसईओ प्रोफाईल निर्माण गर्नुभयो।
यो तरिकाले Google कीराहरू उच्च उछाल दरहरू अनुवाद गर्दछ: मानिसहरू तपाईंको साइट छोडेर छिटो छोडिरहेका छन् कि तपाईं वास्तविकताको प्रकाशमा आइपुगेका छन् कि तपाईं अयोग्य हुनुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि सम्मान नदिनु भएको छ, त्यसैले तपाईं एसईओ पोजीशनिंग शानदार छैन। सबै कुराले विचार गर्यो, तपाईंको वर्डप्रेस साइट पछाडि धकेलिन्छ, र तपाईंको विरोधले तपाईंको स्थिति र गतिविधि लिन्छ। उच्च उछाल दर साँच्चै त्यो भयानक हो।
हामीसँग प्रारम्भिक सेट अप छ। वर्तमानमा हामीले डुङ्गा बनाउनुपर्छ। कुनै समय फ्ल्याटमा, तपाईं त्यो उच्च उछाल दर स्क्वाश गर्दछ जुन तपाइँको सडकलाई अनलाइन उपलब्धि को बाहेक बाहेक गरिएको छ। हामी अघि जान्छु, म तपाईंलाई ती सुझावहरू तुरुन्तै वास्तविक गर्न प्रोत्साहित गर्नेछु, केवल पढ्न सकेन। यो सरल काम हो, र जब हामी तपाईंको वर्डप्रेस व्यवसायलाई सशक्त बनाउछौं, तपाईलाई केही राम्रो समय हुनुपर्छ। ठीक छ, यहाँ हामी जान्छौं ...
[हाम्रो ट्राफिक अध्ययन गर्दै] हामीलाई ज्ञानको प्रमुख बिट दिनुहुन्छ जसले हाम्रो बहुमुखी अनुप्रयोग र डेस्कटपमा हाम्रो वस्तुको प्रगतिलाई बढाउँछ। यसले हामिलाई सही ढंगले संकेत गर्दछ कि व्यक्तिहरूले हाम्रो वस्तुलाई प्रत्येक चरणमा कसरी प्रयोग गर्दैछन्। - जेफ्रे फ्लोर, सीईओ SpreeCast
त्यो छोटो र लामो छ? तपाईं कसरी आफ्नो WordPress साइट मा उछाल को दर को कमी को संभावना छ कि तपाईं मा नहीं जानते जहां मुद्दा झूठ मा संभावना छ? सानो शोध तपाईं अफसेट-अफ-ग्राफ उछाल दर सूचीबद्ध किन ठीक सेट अप गर्न मदत गर्न मद्दत गर्दछ।
सायद तपाईं चीनबाट पेरुसेर्समा खींचिरहनु भएको छ तर तपाईको सम्बन्धी शब्द र वस्तुहरू अमेरिकामा पेरुसेर्सका लागी लागु गरिएको छ। सायद तपाईंको चासोहरूले तपाईको पेरुजरहरूको समन्वय गर्दैन। के तपाईंको उच्च उछाल पहिचान गरिएको छ वा नयाँ रिटाइम अतिथिहरूसँग? सायद यो नवाचार कुरा हो; तपाईंको साइट विलम्ब पोर्टेबल क्लाइन्ट्स।
यो केहि हुन सक्छ। तपाईंको उच्च उछाल दर कम्तिमा एक अवयव फिक्सिंग हुन सक्छ, तथापि तपाइँ आफ्नो गतिविधि ध्यान नदिईसम्म कहिल्यै थाहा छैन। यसको लागि, तपाईलाई एक परीक्षा उपकरण चाहिन्छ, उदाहरणका लागि, Google Analytics, Piwik, Crazy Egg, Clicky, र Web Trends केवल एक जोडी भन्न को लागी।
समाजको अर्थशास्त्रबाट सबैलाई भूमि क्षेत्र, क्लाइन्ट आचरण, र अतिथि शब्दहरू विभिन्न मापको बीचमा प्रयोग गर्ने विचार गर्नुहोस्। यो यात्रामा प्रत्येक सम्भावनाको अन्वेषण गर्नुहोस् - तपाईंले आफ्नो औंलाहरूमा आफ्नो गतिविधिको बारेमा सबै जानकारी दिनुपर्दछ। यो कुरा हो कि मेरो रासायनिक शिक्षकले हामीलाई थाहा पाउँथ्यो - यी कुराहरू तपाईंको औंलाहरूमा छ, वा घर जानुहोस् र पोलिटेक्निकमा छान्नुहोस्। हाहा, पुरानो परिस्थितिहरू।
एक मिनेटको लागि हामी कसरी त्यस्ता हदसम्म पूर्ण प्रेमको रूपमा विविधता खेल्छौं। तपाईं हालैको अडियो गाडी खोज्दै हुनुहुन्छ। गहिरो चमकदार अडीएक्सएनमक्स सटीक हुन। त्यसैगरी अवधारणा Google मा प्राथमिक परिणाम अडीको प्रामाणिक साइट होइन, किनकि शिशुले साँच्चै छिटो ढोका बन्द गर्यो।
तपाईं साँच्चै प्रोभोलियो हुनुहुन्छ कि तपाईंको राक्षसलाई अहिले यो हप्ता एक हप्ताको बाटोमा चलाउनुहोस्। त्यसैले तपाईं Google मा जानुहोस्, अडीएक्सएनएमएक्सएक्स खोज्नुहोस् र एक सट्टा "newcars4.com" मा मौका लिनुहोस् जुन एकान्तर लम्बाईको समय र ब्रह्मा वरिपरि गोल्ड ट्रेक स्ट्याक गर्न। के तपाईं चारैतिर छरितो वा आफ्नो $ 15 पैसा कहीं र खर्च गर्नुहुन्छ? म जान्छु, म यो होईन, यस तथ्यको प्रकाशमा रहन सक्छ कि मध्यम स्थानले तपाईलाई जीवनबाट निश्चय गर्न सक्छ।
तपाइँं प्रत्येक बहुमूल्य मिनेटहरूको प्रत्येकलाई स्केन्डिंग गर्दै हुनुहुन्छ। अधिक छ, के आश्वासन हो कि तपाईं आफ्नो अडीएक्सएनएमएक्स एक हप्ता सम्म अब देखि newcars ​​xNUMX.com प्राप्त हुनेछ यदि साइट अनधिकृत स्टैक ले? अनुमोदन गर्नुहोस्, म यो धेरै टाढा लिन सक्छु, तर त्यो आधारमा छ जुन तपाईले बिन्दु पाउनु भएको छ, हाम्रो स्थितिको लागि: एक उदार साइटले सम्भावित उत्साहहरू उत्प्रेरित गरेको छ। हल्लाउँदै हामीले यस कुरालाई विस्तृत रूपमा तपाईको WordPress पृष्ठ लोड समय घटाउन कसरी हल्लाएका छौं, त्यसैले म चासोको बिन्दुहरूमा तल्लीन गर्नेछु।
हामी यस बच्चालाई अहिलेको पाँचौं उपकरणमा छौँ, र हामी अझै सडक पार्कमा हिंड्यौं। WordPress साइट मार्ग, यो कम उछाल दर कसरी हुन्छ? यो आधारभूत हो; एक भयानक मार्ग ढाँचा एक मार्गदर्शक (वा एक साइन पोष्ट) जस्तो देखिन्छ जुन तपाईंको ग्राहकको माध्यमबाट ग्राहकहरूलाई मार्गदर्शन गर्दछ।
मैरी जेन Google लाई एक प्रस्ताव मा जान्छ एक उत्तरदायी बहुउद्देश्य विषय को खोज को लागि उनको WordPress आधारित व्यवसाय को परिपक्व। तपाईंको अद्भुत "20 सर्वश्रेष्ठ उत्तरदायी WordPress थीम्स 2015 को लागि" पोस्ट को लागी प्रशस्त ब्लग प्रयास गर्न को लागी प्रयास को लागी पहिलो Google मा देखिन्छ, र त्यो नेभिगेट गर्दछ।
उनले सम्पूर्ण पोष्टलाई परास्त पार्छन्, र सनक उत्सवबाट बाहिर छनौट गर्न को लागी तपाईंको वर्डप्रेस विषय पृष्ठमा छनौट गर्दछ जुन उनले तपाईंको हेडर, साइडबार वा फुटर मार्ग मार्ग मेनूबाट फाइदा उठाउन सक्दछन्। सम्भावना बिना कि उनले तपाईंको कुनै पनि विषयहरू खरिद गर्दैनन्, उनी उछाललाई विचार गर्दैनन्।
वर्तमान मा मेरी जेन अनदेखी। जोन डाउलाई विचार गर्नुहोस् जसले तपाइँलाई तपाइँको साइट पत्ता लगाउनुभयो (जसको माध्यमबाट जुन) केहि डेटा पत्ता लगाउन आवश्यक छ। जॉन डो को लागि तपाईंको मार्ग ढाँचा को माध्यम ले तपाईंको साइट मा सामाग्री को खोज को लागि सरल छ? के तपाईं सोच्नुहुन्छ कि त्यो घटनामा चारैतिर रहनेछ कि उसले खोज्न सकेन कि उसले के खोज्न सक्दैन?
उत्तम मार्ग ढाँचा प्रयोग गर्न केहि गाह्रो छ। यो आधारभूत र स्पष्ट छ, जसले यो जावा निर्देशात्मक अभ्यास खोजिरहेको थियो यो पटक सम्झन मद्दत गर्दछ। यसैले म यस वैध साइटमा एक वैध संगठन (कुनै नाम छोडेर, कुनै साइकललिंग) द्वारा पुग्यो।
साइटले असाधारण - योग्यता रेखाचित्र र कामहरू देख्यो। म यस प्रकारको साइटमा छलफल गरिरहेको छु जुन तपाईं पर्याप्त भरोसा गर्नुहुनेछ कि बुझ्नको लागि चयन गर्नुहोस्। कुनै पनि मामलामा, मैले नि: शुल्क जाभा अनुदेशात्मक अभ्यासमा पाउने काममा राख्नु अघि थियो कि तपाईलाई बुझ्न चाहन्छु, तपाईको बारेमा थाहा छ।
लामो कथा छोटो, अनुदेशात्मक अभ्यास एक सुपर मेनुमा केहि स्तरहरू घुम्न थाल्यो, र मैले आधारमा चाहिन्छ कि म द्वारा र एक रोगी व्यक्ति ठूलो ठूलो छ, र म वैध जावा निर्देशात्मक पत्ता लगाउन असन्तुष्ट थियो आवश्यक छ व्यायाम गर्नुहोस्। कुनै पनि अवस्थामा, मैले ड्रप डाउन मेनू को माध्यम ले एक एकल कोर्स को खोज को बारे मा भयानक महसूस गरे, जसले मेरी इच्छाहरु को बारे मा सबै चीजहरु लाई विचार गरे को ग्रेड नहीं बनाया। Meh। टायरको अन्त्य
एक साँच्चै हलचल व्यक्तिको लागि उनीहरूलाई साँच्चै आवश्यकता पर्ने केही सम्पत्तिको लागि तपाईको सम्पूर्ण मार्ग हेर्न को लागी पर्याप्त ऊर्जा छैन। तपाईंको मार्ग ढाँचा को माध्यम ले खोज गर्न को लागी कुनै पनि जरूरी चीज बनाइयो, र तपाईंको उछाल दर निस्संदेह उतरना हुनेछ। के म तिम्रो तर्फबाट तोड्दै छु? यहाँ लिवेभर छ:
सीधी, सिधा फर्वार्ड मार्ग बनाउनुहोस्
सुपर मेनू असाधारण देखिन्छ, तर के तपाई साँच्चै उनीहरूलाई चाहिन्छ?
तपाईंको वर्डप्रेस साइटमा साइटमैप थप्नुहोस्। तपाईं मड्यूलहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणको लागि, Google XML Sitemaps वा शीर्षकमा साइमप्याप्समा विषयको प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंको हेडर, फुटर र साइडबारमा मार्ग मेनू थप्नुहोस्
साइडबारमा वर्गहरू, फाइलहरू र लेबल समावेश गर्नुहोस्
सुरक्षा ग्याजेटको रूपमा खोजी खोजी बाकस समावेश गर्नुहोस् तपाईंको मेनूमा फ्ल्याट हुनुपर्छ। तपाईंको अन्वेषण बक्स पनि तपाईंको मार्ग ढाँचा र ग्राहक मुठभेड बढाउन सक्छ। उदाहरणका लागि, तपाईंको वर्डप्रेस वेबपेजको लागि एक तीव्र र सटीक इन्टरनेट खोजकर्ता निर्माण गर्न सम्बन्धित
जब तपाई किन किनमेल केन्द्रमा जानुहुन्छ, के तपाईं पसलहरुमा आफ्नो समय बिचराउनुहुन्छ कि गरीब वा मृगौला तार प्रस्ताव गर्ने? म तिमीलाई उत्सुक बनाउँछु, तपाईं एक यस्तो पसल को मालिक हुनुहुन्छ जब सम्म कुनै संदेह छैन।
गरिब पदार्थले तपाइँका पनीरहरू तीव्र गतिमा पठाउँदछ भन्दा तपाइँ तिनीहरूलाई उठाउन सक्नुहुनेछ। मलाई थाहा छ, के तपाईं भन्नुहुन्छ कि तपाईं वेब मा अन्य मजाक चीजहरू विभिन्न प्रकारका छन् जब तपाईं बहुमूल्य ऊर्जालाई खराब पदार्थ कोषमा लगानी गर्नेछौं? तपाईं जान्दछन्, चेजबर्ग, युट्युबमा मनोरञ्जनका फेलिभिजन रेकर्डिङको रूपमा, र अरूको बीचकोचर्च। के गरिब पदार्थले बनाउँछ?
स्टेल पदार्थ - कृपया तपाईंको सामग्री पुनः जारी राख्नुहोस्
अपर्याप्त व्यवस्थित र अनुमानित चित्रहरू - एक घटक चित्र 660px चौडाइमा छ, निम्न 350px हो।
प्रतिलिपि गरिएको सामग्री - तस्विर सहित। मालिकको लागि क्रेडिट मिडिया, र कहिल्यै डुप्लिकेट पदार्थ। यो अवैध छ।
आधार मा आफ्नो पदार्थ बदल्नुहोस् र सम्पादन गर्नुहोस् कि एक ब्लग प्रविष्टि प्रकार संग मिर्च र अलग अपमानजनक निरीक्षण बस यादगार छ
साथै, तपाईंको वर्डप्रेस ब्लगमा सामग्रीको पत्यारिता बढाउन प्रयास गर्नुहोस्। सुव्यवस्थित पदार्थले व्यक्तिहरूलाई जोडिएको पृष्ठहरूमा नेभिगेट गर्न आग्रह गर्नेछ
कसरी? प्रयोग गर्नुहोस्:
शीर्षकहरू र उप शीर्षकहरू
ठूलो पाठ शैलीहरू
असाधारण शैडो भिन्नता भनेको आँखाका लागि विचारशील छ (दुई-तीन छायांकन योजनाहरूको लागि स्टिक)
धेरै सेतो ठाउँ
असाधारण मिडिया सामग्री
तपाईंको वर्डप्रेस ब्लग प्रविष्टिहरू गर्दा, वर्गीकरणहरू र लेबलहरू समावेश गर्दछ, त्यसैले पेरुर्सहरूले थप प्रतिरूपको लागि सम्बन्धित बिन्दुहरू पत्ता लगाउन सक्छन्। तपाईंको ब्लगलाई भर्खरैको सामग्रीको साथ पुनःस्थापित राख्न दिमागमा रहनुहोस् किनकि यसले ग्राहक भक्ति र एसईओलाई बलियो बनाउँछ।
यसबाहेक, व्यक्तिको सही सभामा ध्यान केन्द्रित गर्दै ग्यारेन्टी गर्नको लागी तपाईंको लक्षित रुचि समूहको विशेषता। हुनसक्छ, तपाईले आफ्नो दृष्टिलाई विस्तृत रूपमा सेट गर्नुहुनेछ, तपाईं छोटो आउँनुहुनेछ र ती उछाल दरमा ढेर आउनुहुनेछ।
सबैले तपाईको वर्डप्रेसमा बहालीको उछाल दरको प्रयास गर्दछ जुन तपाइँले कुनै पनि अवस्थामा गलत गल्तीमा फोकस गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई केहि पनि नगराउँदैन। यदि म ठूलो हुन्थ्यो, म मेरु, केन्या, ठाउँको बारेमा कथाहरू साझेदारी गर्न सकिनँ, म मेरो नजिक उपलब्ध एसईओ रणनीतिहरू प्रयोग गर्न सक्दिनँ, म मल्टिनका लागि खोजी प्रतिभाहरु मा लागेन। उदाहरणका लागि मर्मु तान्जानिया। सिमितता म चाहान्छु कि तिरुवा, FL मा स्थित मेरू सञ्जाल खोज्दै ग्राहकहरु मा मेरु टेक्सिस खोज्ने को लागी पेरिसरहरुमा आकर्षित नगर्ने।
सामान्य मौकामा मैले सामान्यतया सामान्य जनसंख्या बाहेक सबैलाई खिचेको छु जुन मैले ठूलो स्थानमा उत्सुकता पाएको छु, मेरो वर्डप्रेस साइटले उच्च उछाल दरमा नामाकरण गर्दथ्यो - पछि जब मैले गलत दर्शकहरूलाई ध्यान दिएँ।
तपाईंको पीपीसी को बढावा दिन को प्रयास को लागि समान छ। बन्द मौकामा तपाईंले आफ्नो फोकस गलत पार्नु भएको छ, तपाईले सबै कुरामा आकर्षित गर्न तिर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईले आवश्यक पर्दछ। तपाईंको एसईओ र पीपीसी क्रुसियडहरू श्रिड क्रेफ्रेज परीक्षणद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ। अवलोकनको प्रयोग उपकरणहरूको बारेमा सोध्छन्, उदाहरणका लागि, Google AdWords Keyword Planner, Word Tracker, Yoast Suggests र अन्यहरू मध्ये KWFinder.com।
तथापि ब्याज को बिन्दुहरु लाई पसीने को लागी प्रयास न गर्नुहोस, हामी तपाईंको बैक यिनी एक्सप्रेशेड SEO सर्वश्रेष्ठ एक्सटेन्सन को साथ 2015 र परे संग सुरक्षित छ। साथै, तपाईं आफ्नो सबै चिन्हित उदाहरणका लागि माथिको स्थितिलाई माथि राख्नुहोस् जस्तै तपाईंको छवि वा वस्तुको नाम।
उछाल दरको सन्दर्भमा, तपाईंको जडानहरू सुचारु गर्न सक्नु हुन्छ र तपाईको साइटलाई मेलको रूपमा फिट गर्न ठूलो मात्रामा चीजहरू छन्। बिच्छेदन जडान, तपाईंको इन्टरलिङ्क गर्ने रणनीति बढाउने र खुल्ला एक्बेर ट्याबहरूमा सामेल हुन्छन्, सुरु गर्न असाधारण दृष्टिकोण हो।
अर्को अतिथिले तपाइँको वेबपेजमा कुनै पनि वेबसाइट पृष्ठ वा पोस्टको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्छ। कुनै पनि मामला मा, यदि टूटा कनेक्शन तपाईंको वर्डप्रेस साइट लेटर गरे हो, तपाईंको संभावनाहरु लाई उनि डेटा को आवश्यकता कभी नहीं खोज पाए, र यसैले, फिर्ता पकड हिट। बन्द मौकामा उनीहरूले पछाडि कुचलाई कुटपिट गर्न जारी राखेमा, तपाइँ उच्च उल्टाउको दर सूचीबद्ध गर्न सक्नुहुनेछ जुन सजिलो निर्णय हो।
तपाईले तपाइँको वर्डप्रेस साइटलाई एक मोड्युल प्रयोग गरी बिच्छेदन जडानहरूको लागि जाँच्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, टूटेको लिङ्क परीक्षक। अझ पनि राम्रो, तपाईं अनलाइन अनलाइन उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, W3C लिङ्क परीक्षक। उत्तम सबै बटाईएको जडानहरुलाई बटाउन को लागी उछाल को बन्द गर्न को लागी लंबा छ 'यो हुन्छ।
यद्यपि, जब एक गति वृद्धि वा केही अन्य कारणको जडान साँझको समय वरिपरि घुमाउँदा के गर्ने गर्दछ? निस्सन्देह, यो सरल छ - तपाईले अनुकूलन 404 पृष्ठहरू सिर्जना गर्न वा भित्ता सम्पत्तिमा टूटेको जडानहरू उल्टाउन सक्नुहुन्छ, उदाहरणको लागी, तपाईं प्रस्तुतीकरण पृष्ठ वा जुनसुकै पृष्ठमा तपाईंले अनुमोदन गर्नुहुन्छ।
यहाँ वर्डप्रेसमा कस्टम 404 पृष्ठ बनाउनको लागि यहाँ छ र यहाँ एक सरल 301 रिडाइरेक्ट्स मोड्युल हो जुन विकिरण व्यवसायमा मद्दतको लागि।
उछाल दर देख्दा अतिथिहरूको दर हो जुन सेक्सको पृष्ठलाई उल्टाउन मद्दत गर्दछ, भित्रको सम्पत्तिमा स्पष्ट जडान थप्न सक्नु अघि धेरै अतिथिहरू पहिले पृष्ठमा क्लिक गर्न आग्रह गर्दछ। बन्द गर्ने मौकामा तपाइँसँग एक आकर्षक ब्लग प्रविष्टि छ जुन तपाइँको बनावटको समर्थन गर्दछ, यसलाई तपाईंको फरक पृष्ठबाट छुनुहोस्, आगमनको अंकहरू समावेश गर्दछ।
सम्भावनाहरू जुन तपाईंको ग्रीष्म पृष्ठमा स्न्यायर नबनाउन तयार छैन तपाईंको साइट को बढावा गर्न को लागी हुन सक्छ। सम्भावित सम्पत्तिकासँग जोडिएको सम्भावित अनुमानहरूको लागि यो सरल बनाउँछ। जब वे नेभिगेट गर्छ, तपाइँको उछाल दर घट्छ।
नयाँ ट्याबहरूमा बाह्य लिंकहरू खोल्नुहोस्
चयन गरीएको पछाडि फर्काउनु अघि नयाँ सञ्झ्यालमा जडान बाहिर निस्कने ग्राहकहरू द्वारा अस्वीकृत भएकोले यसले ग्राहक मुठभेडलाई बिच्छेद गर्यो। त्यसो भए कि यो हो कि जुनसुकै छनौट छान्नु भएको छ, सबै स्थानीयहरु संग वेब सर्फ गर्दा सबै भन्दा सजिलो सजिलो हुन्छ र रमाइलो पनि हुन्छ।
आज, नयाँ ट्याबमा हरेक बाहिरको जडान खोल्नको लागी तपाईंलाई हानिकारक हुनुपर्दैन, जबसम्म जाहिर छ भने, तपाइँको ग्राहकहरूले पुरानो कार्यक्रमहरू स्वीकार गर्छन् जुन ट्याबहरू बज्दैनन्। नयाँ ट्याबहरूमा कसरी खुल्ला बाह्य जडानहरू तपाईंको वर्डप्रेस साइटमा उछाल दरहरू ल्याउनुहुन्छ?
भन्न दिनुहोस् कि तपाईंले उत्कृष्ट ब्लग प्रविष्ट गर्नुभएको छ, र एक बाहिरको साइटमा लागू सम्पत्तिहरूसँग जोडिएको छ। घटनामा यी बाह्य जडान समान कार्यक्रम कार्यक्रम / ट्याबमा खुल्दछ, वैज्ञानिक प्रोग्रामिङ नम्बरहरू जुन बाहिर निस्कन्छ। जस्तो कि यो हुन सक्छ, अफलाइनमा नयाँ ट्याबमा बन्द गर्ने मौकामा, तपाईंको पेसरले तपाईंको साइट छोडेर बाहिरको सम्पत्ति पाउन सक्दछ। बाह्य जडानहरू सहित, "अर्को सञ्झ्याल / ट्याबमा खोल्नुहोस् जडान" ट्याक गर्नुहोस् निम्न रूपमा प्रदर्शन गरिएको चेकबक्स:
तपाईंको वर्डप्रेस साइट अपडेट गर्नुहोस्
मलाई यहाँ मनोरञ्जन: के तपाईं एक साइट को वरिपरि छ (र काम गर्ने) छ कि जस्तो देखिन्छ जस्तो कि यो एक पाँचौं ग्रेडकर्ता द्वारा काम गरेको थियो? घटनामा तपाईको साइट औसत भन्दा राम्रो देखिने छैन, तपाईं आशा गर्न सक्नुहुन्न कि ती व्यक्तिहरूले के प्रस्तावमा के खरिद गर्न पर्याप्त लामो वरिपरि रहनेछन्।
संसाधनहरूलाई व्यावसायिक योजना बनाई विषयमा राख्नुहोस्, उदाहरणको लागि, एक प्रकारको कुल उत्तरदायी बहुउद्देशीय WordPress विषय। साथै, तपाईं WordPress.org वा विक्रेताओंबाट सरल, आकर्षक विषयहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, Themeforest र सुरुचिपूर्ण विषयवस्तुहरू।
त्यसोभए, तपाईं पहिलो साइट वर्डप्रेस पृष्ठ विकासकर्ताहरू प्रयोग गरी टुक्राद्वारा आफ्नो साइट टुक्राको निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, दृश्य सङ्गीतकार वा बेभर बिल्डर अझै एक जोडी भन्नको लागि। तपाईं समान तरिकाले थोरै जवान कलाकारहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई वर्डप्रेस विषय प्रणालीको साथमा, उदाहरणका लागि, उत्पत्ति वा थेसिस।
त्यसो भए कुनै पनि विकल्पहरू नभएसम्म अन्य विकल्पहरू नभएसम्म तपाईले केहि आवश्यक विकल्पहरू सजिलो नहुन सक्दछ र तपाइँसँग केहि नगद बचत गर्न सक्नुहुनेछ, माथिको वर्डप्रेस डिजाइनरको रूपमा खरीद गर्ने बारे सोच्नुहोस्। तपाईलाई ठीकसँग तपाईले के गर्न चाहानुहुन्छ (मात्र सम्झनुहोस् यो प्रायः सबै भन्दा महंगा र थोरै छनौट छ। आफैलाई कोड कसरी गर्ने भनेर लगाउँदा शर्मीला
तपाईंको साइट अपग्रेड गर्दा, केहि सामाजिक सत्यापन सहितको बारे सोच्नुहोस्; प्रशंसकहरूको संख्या, फ्यानहरू, श्रद्धांजलिहरू - ग्राहकहरूलाई अन्य कुरा बताउँछ जुन तपाईंको वस्तुहरू जोगाउँछ। यस घटनामा तपाइँसँग अहिले सम्मको धेरै संख्याहरू छैन, तपाईले सिधा साधु हुनु भएको तथ्यको बावजूद कम क्यारेक्टर क्लाइन्ट ट्रस्ट खारेज गर्न केहि समय सम्म सामाजिक पुष्टिकरण बिर्सन विचार गर्नुहोस्।
तपाईंको ग्रीटिंग पृष्ठहरू स्तरवृद्धि गर्नुहोस् पनि A / B परीक्षण र पदार्थ परीक्षण प्रयोग गर्दछ। एक चीज तपाईं अधिेक्षा गर्न चाहानुहुन्छ एक CTA सहित तपाईंको स्वागत पृष्ठहरु को स्पष्ट र सार्थक क्षेत्रहरु लाई समाविष्ट गर्दछ। तीन सीटीए क्याचको सबैभन्दा चरम पर्याप्त हुनुपर्छ; एक चाँडो मुख्य, एक केन्द्रमा र बेस तिर तिर एक।
अझै आगमनको यो बिन्दुमा, तपाईँका फरक समूहहरूको लागि भित्ता प्रकारहरूको ग्रीटिंग पृष्ठहरू परिवर्तन गर्दै। मानिसहरूको एक विशेष जम्मा संलग्न गर्न हरेक बिन्दुको लागि असाधारण पदार्थ र अतिरिक्त क्रेफ्रफेसहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
साइट अपडेटमा फर्किंदा, मोड्युसनको बाटो हो, वा माया माया एन्जेलो (परमेश्वरले आफ्नो आत्मा अनन्त शान्तिमा राख्न सक्नुहुनेछ), "प्रगतिको अनुच्छेद पूर्ण निरर्थकता हो।"
एक अमीर र जटिल साइट बनाउन आवश्यक छ कि ट्रेलिहरु मा संभावनाहरु मा आकर्षित हुनेछ? त्यस समयमा तपाईँले वेबमा साइटलाई कम से कम कठिन र अधिक सिधा उपयोग गर्न आवश्यक छ। अनियमित घटकहरू डिस्पेस गरेर सुरू गर्नुहोस् जुन समर्थन वा समर्थन गर्दैन।
यसको माथि, अवरोधक पपअप र पदोन्नतिबाट एक रणनीतिक दूरी कायम राख्नुहोस्। यसको अतिरिक्त, तपाइँले आफ्नो वर्डप्रेस साइटमा सेवा गर्ने विज्ञापनहरूको ग्यारेन्टी तपाईंको पदार्थ र विशेषताको लागि महत्त्वपूर्ण छ। साइडबारमा महत्त्वपूर्ण पदोन्नति राख्नुहोस्, र त्यस घटनामा तपाइँ आफैले स्ट्याकिंग दृश्य र ध्वनि विज्ञापन बाट रणनीतिक दूरी बनाए राख्न सक्नुहुनेछ।
बिन्दुमा सबैले भन्नु भएको छ भने, तपाईंको साइटलाई डेस्कटप र बहुमुखी ग्राहक दुवै खातामा लिनको लागि जिम्मेवार छ। एक उत्तरदायी WordPress विषय छान्नुहोस्, (उदाहरण को लागि, कुल) सुरु बाट। त्यसै गरी ग्यारेन्टी तपाईंले रोज्नु भएको मोड्युल सेल फोनका लागि सुधारिएको छ।
पासपोर्ट पृष्ठ अतीत गर्न सम्भव छ? त्यस समयमा उनीहरूले तपाईंको सामाग्री को एक धेरै मात्रा को खोज गर्न को लागि सरल बनाउँछ। तपाईले सम्बन्धित पोस्ट ग्याजेटहरू तपाईंको ब्लग इन्टरको वा तपाईंको साइडबारको अन्त्यमा राख्न सक्नुहुनेछ - सजिलै पक्का कि उनीहरूले तपाईंको प्रतिभाको लागि स्पष्ट छन्। उप्लिभिंग समाचार तपाईंलाई एक सभ्य प्रयत्न गर्न आवश्यक छैन, त्यहाँ सँधै कठिन काम संग सहयोग मा अन्तर्वार्ता वर्डप्रेस सम्बन्धित प्रस्तुत मोडहरू छन्।
यस तथ्यको बावजुद यो यसले तपाईंको बोनस दरहरू संग सुरु गर्नमा महत्त्वपूर्ण असर पार्दैन, ब्लग टिप्पणीले लामो हाउसमा माथि क्लाइन्ट सगाईलाई मद्दत गर्न सक्छ, जसले तपाईंको उछाल दर घटाउँछ। जब तपाइँ आफ्नो क्लाइन्टहरू ब्लग खण्डमार्फत राख्नुहुन्छ भने, तिनीहरू निस्सन्देह तपाईंलाई विश्वास गर्नुहुनेछ, तपाईंको ब्लगमा थप ऊर्जा लगानी गर्नुहोस् र अरूलाई तपाईंको सामग्री प्रदान गर्नुहोस्।
यो तपाईंको साइटमा कुनै पनि अन्य जस्तै तपाईंको सम्भावना एक सम्बन्ध दिने बारेमा छ - को बारे मा बदली को रूप मा राम्रो तरिकाले आफ्नो चुने भएका क्षेत्र मा हुन सक्छ।
जब तपाईं आफ्नो सम्भावना को योजना, आफ्नो पदार्थ र वस्तुहरु संग समन्वय गर्छन, र त्यस पछि उनको स्वर्गीय रूपरेखा मा सबै लपेटा, तपाईंको वर्डप्रेस उछाल दर को कम गर्न को लागी केहि पनि नहीं छ।
आज यहाँ सुझाव गरिएका सुझावहरू लिनुहोस्, र तपाइँसँग साझेदारी गर्न एक टिप हुनु पर्छ, वा गड्ढ्नको लागि प्रश्न हुनुपर्छ, कृपया तलको टिप्पणी क्षेत्र प्रयोग गर्न संकोच नगर्नुहोस्। हामी तपाईंको विचार सुन्न चाहन्छौं - अलविदा!
यस सीजन, Google डूडलले छुट्टै सुरुवात मनाउँछ